Birth Ọkwà - Mee Ahaziri Photo Birth Ọkwà
> Resource> Atụmatụ> Olee otú Mee a Ahaziri Baby Photo Birth Ọkwà
Mgbe gị ọhụrụ nwa-abịa, adịghị ị chọrọ ịkọrọ ndị oké ozi ọma na ụwa dum? Ma olee otú ị ga-ekere òkè a ozi ọma? Na-emekarị, ndị mmadụ zipụ ụfọdụ nwa mụrụ mara ọkwa. Ụfọdụ ndị na ịzụta ụfọdụ nwa mụrụ mara ọkwa kaadị. I nwekwara ike ime otú ahụ. Otú ọ dị, adịghị na ị chọrọ ka nwa mụrụ mara ọkwa ọzọ ahaziri na ka onye ọ bụla mara na ị na-agọzi na nwa mbata?
Iji mee ka a ahaziri nwa mụrụ mara ọkwa, ị nwere ike itinye gị na nwa foto na mụrụ mara ọkwa. Weghara a foto nke ị obere nwa na-eso ya na ndị ezinụlọ na ndị enyi. I nwekwara ike ime ka printable nwa mụrụ mara ọkwa kaadị na email ha ka ha ezinụlọ na ndị enyi.
Ị nwere ike iji Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe ka ahaziri na printable nwa foto mụrụ mara ọkwa kaadị. Na-amalite site wuru na-free ndebiri, ị nwere ike ime ka onye na anya-akụta nwa foto mụrụ na kaadị clicks! Ihe bụ ihe ọzọ, ọtụtụ edezi ngwaọrụ na ọcha dị ka ederede, cliparts, nzacha, masks, doodle ịbịaru, wdg-nyere iru gị creativity.
Nweta software na-amalite na ike gị nwa a mụrụ mara ọkwa.
Mgbe nbudata, wụnye na-agba ọsọ Photo Collage Studio. Họrọ "Mepụta site Template" na-amalite na-eke a mụrụ mara ọkwa. Ma ị na-eme ka a nwa nwoke mụrụ mara ọkwa ma ọ bụ a nwa nwanyị mụrụ mara ọkwa, dị nnọọ itinye nwa foto na-eji ndị kwesịrị ekwesị nwa mụrụ wordings.
1 Họrọ a nwa mụrụ mara ọkwa template
Na Template window, họrọ "ekele Kaadị" na ekpe na-agagharị na foto kaadị ndebiri ke ziri ezi. Chọta onye na-amasị na abụọ pịa ya ma ọ bụ iti "OK" itinye.
2 Tinye ị nwa foto ma dezie foto
Ikpuru & dobe foto na template etiti ma ọ bụ abụọ pịa etiti ka ịgbakwunye foto. Ahụ na-aga na "Dezie Photo" taabụ dezie nwa photos, dị ka itinye ụfọdụ nkpuchi mmetụta, na-agbanwe a foto etiti, wdg
Tinye ederede ka nwa gị mụrụ mara ọkwa
Pịa "icho mma collage" ịgbakwunye ụfọdụ nwa mụrụ mara ọkwa sụgharịa. I nwekwara ike ịgbakwunye ụfọdụ clip nkà, stampụ na ọbụna doodle itinyekwu fun na mmetụta na kaadị.
3 Zọpụta kaadị ma ọ bụ bipụta ya si kpọmkwem
Ugbu a na ị nwetara na nwa gị mụrụ mara ọkwa kaadị dị ka nke a.
I nwere ike ịzọpụta ya dị ka oyiyi ma ọ bụ dị ka akwụkwọ ahụaja na taabụ "Save collage" na mgbe e mesịrị ị nwere ike izipu ya site na email ịkọrọ gị na ezinụlọ gị na ndị enyi.
Ọ bụrụ na ị nwere a na ngwa nbipute mmasị, ị nwere ike ozugbo ibipụta mụrụ mara ọkwa na elu foto mma.
Birth Ọkwà sụgharịa maka Boys na Girls
Beach Scrapbook layouts na Page Ideas
Olee otú Mee a kpatụ aka gaa na ngosi mmịfe na Embed ka weebụsaịtị